भुइँचालोमा २२ घन्टा पुरिएका सोनिस अवाल - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ७ बैशाख २०७८, 10:22 pm
निलो टिसर्ट र हाफ पाइन्ट लगाएका फुच्चे केटो दुगुर्दै कोठाभित्र पसे। उनको हातमा स्कुलको रिजल्ट थियो। पछिपछि उनकी आमा रश्मिला अवाल थिइन्। ‘खोइ, खोइ! रिजल्ट हेरौं त,’ हाम्रो आवाज सुनेर उनी एकछिन अलमलमा परे।
ढोकामै अडिएर आमाको अनुहारतिर हेरे। यसरी कोठामा नयाँ मान्छे आउनु उनको निम्ति सामान्य थियो सायद। उनी अप्ठ्यारो नमानिकनै हामीनजिक आए। रिजल्ट देखाउँदै प्रत्येक विषयको ‘ग्रेड’ ठूलो स्वरमा सुनाउन थाले, ‘ए-प्लस, बी-प्लस, डी-प्लस, सी-प्लस, बी-प्लस…।’
आज छ वर्षपछि उनी हामीलाई स्कुलको मार्कसिट पढेर सुनाइरहेका छन्। ‘एसकेजी’ मा पढिरहेका सोनिस अवाललाई हामीले सोध्यौं, ‘म्याथमा त डी-प्लस मात्र आएछ नि है? राम्रो हो त्यो?’
उनले एक अक्षरमा जवाफ फर्काए, ‘नो।’ सोनिस धेरै प्रश्नको जवाफ ‘यस’ र ‘नो’ मा फर्काउँछन्।
‘झ्याउ लाग्छ हो म्याथ?’ ‘म्याथ होइन सबैमा झ्याउ लाग्छ,’ त्यसो भन्दै उनले रिजल्ट दिदी सोनियाको हातमा थमाए अनि टेबलमा चार्ज भइरहेको मोबाइल थुतेर त्यसैमा झुम्मिन थाले।
स्कुलको परीक्षा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जिन्दगीको परीक्षा भने यी दिदी-भाइले भुइँचालोमै ‘पास’ गरेका हुन्।
बाहिर होहल्ला हुन थालिसकेको थियो। सबै ‘भुइँचालो आयो’ भन्दै भागाभाग गरिरहेका थिए। सोनियालाई आफ्नै पैतलामुनिको भुइँ सरकसरक सरिरहेजस्तो लाग्न थाल्यो। भित्ताहरू चरकचरक फाटिन थाले। त्यहाँबाट फुसफुस धूलो झरिरहेको थियो।
काठका साँघुरा भर्‍याङबाट गुर्रर झर्न मात्र आँटेकी थिइन्, उनलाई ‘प्यारो’ भाइ सोनिसको ख्याल आयो।
पसल जानुअघि आमाले भनेकी थिइन, ‘टिभीमा मात्र भुल्ने होइन नि, भाइको पनि ध्यान राख्नू।’
‘हुन्छ ममी,’ उनले आश्वस्त पारेकी थिइन्।
छ वर्षमा हल्का मोटाएकी छन् रश्मिला। आँखामा पावर चस्मा चढेको छ। उनी भुँइमा थुचुक्क बसिन्, ऊन र कुरुस समात्दै बोल्न थालिन्, ‘भूकम्पपीडित भएर बाँचेको छ वर्ष भइसक्यो। केही गर्न सकेको छैन। ज्याला मजदुरी गरेबापत आएको पैसाले खानै पुग्दैन रहेछ।’
‘दुई-तीन महिनामै बनाउने सोचेका छौं। पैसा त जुटिरहेको छैन तर हेर्दै जाऊँ,’ उनले भनिन्, ‘ऋण गरेर हुन्छ कि जे गरेर भए नि अब त टहरा भए नि बनाउने।’
आफ्नो घर भए जे गर्दा पनि हुन्छ। नाचे पनि ठीक, उफ्रे पनि। हल्ला गरे पनि ठीक, रोए पनि। अरूले त्यस्तो मन पराउँदैनन्। झन् साना केटाकेटीलाई त जति सम्हाल्न खोज्दा पनि होहल्ला गरिहाल्छन्। त्यसैले रश्मिला भन्छिन्, ‘अरूको भनेको अरूकै हुन्छ। आफ्नोमा त छ खाउँला, नत्र चुप लागेर बसौंला। डरैडर र किचकिच सुनेर त बस्नुपर्दैन।’
भुइँचालोपछि सरकारले पीडितहरूलाई राहत पनि बाँडेको थियो। घरधनीपुर्जा नै नभएपछि रश्मिलाको परिवार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो। पुर्जा नभए पनि उनीहरू बाजेबराजुदेखि नै यो ठाउँमा बस्दै आएका हुन्। नापी आउँदा घरमा कोही नभएर नाम लेखाउन छुटेको बताउँदै रश्मिला भन्छिन्, ‘सरकारले जब स्ववासी भनेर दर्ता खोल्छ, त्यही बेला जग्गा पनि दर्ता गराउँछौं।’
‘नियमले त के भन्छ के? हामी नगरपालिकासँग सल्लाह लिन्छौं, तर मिल्दैन भने पनि बनाउने हो,’ रश्मिलाले भनिन्, ‘हाम्रो त तीन पैसा भए पनि छ, कि त हामीलाई अन्त ठाउँ दिनुपर्‍यो, नभए यहीँ टहरा बनाउन दिनुपर्‍यो।’
यिनै समस्याले रश्मिलालाई बढी चिन्तित बनाउँछ। बजारमा सबथोक किन यति महंगो भनेर बेलाबेला मुर्मुरिन्छिन्। अस्ति भर्खर दुई बोरा चामल किन्दा उनलाई त्यस्तै भएछ, ‘पाँच हजार तीन सय रुपैयाँ गयो। मेरो त यति धेरै चित्त दुख्यो नि, भन्नै लाज हुन्छ। साँच्चै रासनहरू किन यति महंगो भएका होलान्? खानै लोभ लाग्ने भयो। जति मिहिनेत गरेको छ, खानै ठीक्क।’
उमेर र ऊर्जा हुँदा रश्मिलालाई लाग्थ्यो रे– आफूले जे पनि गर्न सकिन्छ। त्यो बेला उनले ज्यामी कामदेखि खेतीपातीसम्मका काम गरिन्। अहिले ४२ वर्षकी उनी निराश हुन थालिसकिन्, ‘ह्या! यस्तो नि के जिन्दगी? जति गरे पनि दिन फेरिन्न।’
‘यिनीहरूको बुवा पनि गर्दागर्दै थाकिसक्नुभयो,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘सोच्दा सोच्दा दिमाग ह्यांग हुन्छ कहिले त। यति टेन्सन… यति टेन्सन। हत्तेरी!’
बुनिरहेको पन्जा बुन्न छाडेर उनी एकछिन मौन भइन्। फेरि आफैंलाई सान्त्वना दिँदै भनिन्, ‘हुन त हाम्रोभन्दा धेरै दुःख भएको मान्छे नि हुन्छन् नि है?’
भुइँचालोमा सरकारबाट सहयोग नपाउँदा उनी त्यसरी नै आफूलाई सान्त्वना दिन्छिन्, ‘हाम्रोभन्दा धेरै दुःख भएको मान्छे नि हुन्छन् नि है।’
‘कतिपटक त आफैंले फोन गरिसकेँ। म त माग्नेजस्तै भइसकेँ भन्या। बेकार फोन गरेर पैसा मात्र सकिने,’ उनले फेरि दोहोर्‍याइन्, ‘हुन त हामीजस्तो पीडित अरू पनि होलान् नि।’
घर बनाउन नपाउँदाको मानसिक असर रश्मिलाको दिमागमा मात्र होइन, परिवारमै फैलिएको छ। सोनिसले पनि बेलाबेला भनिरहन्छन् रे, ‘ममी यहाँ नबस्ने, हामी आफ्नो घर कहिले बनाउने?’ हामीले उनलाई सोध्यौं, ‘यहाँ बस्न किन मन लाग्दैन?’ चुलबुले पारामा सोनिसले जवाफ फर्काए, ‘अरूको घर हो नि त।’ साभार : सेतोपाटी